'Taageerada Apple' waxay fududeyneysaa in la arko dammaanadda iyo caymiska alaabteenna | Wararka IPhone
'Taageerada Apple' waxay sahlaysaa in la arko dammaanadda iyo caymiska alaabteenna
Angel Gonzalez | 07/04/2021 20:00 | Noticias, Alaabada Apple
Iibsasho cusub qalab dhinaca isticmaalaha waa inuu lahaadaa taxane astaamo aasaasi ah si macaamilku u xasillooni. Ugu horreyntii, macluumaad tayo leh oo ku saabsan qalabka aad iibsaneyso. Marka labaad, daahfurnaan ku saabsan habka dhoofinta, qiyaasta muddada iyo taariikhda dhoofinta qiyaas ahaan. Ugu dambeyntiina, bandhig ah caymiska iyo dammaanadda ay shirkaddu bixiso. Apple waxay bixisaa damaanad-qaad hal sano ah oo ku saabsan dhammaan qalabkeeda iyadoo suurtagal ay tahay inay iibsato caymis dheeri ah, AppleCare. Iyadoo cusbooneysiinta barnaamijka cusub 'Taageerada Apple' Waan hubin karnaa dammaanadda qalabkayaga iyo caymiska haddii ay dhacdo inaan haysanno AppleCare.
Ka hubi caymiska qalabkaaga 'Apple Support'
Ma u baahan tahay caawimaad? Ka hel taageerada farsamo ee aad ugu baahan tahay badeecooyinka aad ugu jeceshahay Apple - dhammaantood hal meel ka wada. Taageerada Farsamada Apple waxay ku siineysaa adiga helitaan shaqsiyeed xalalka dhamaan alaabadaada iyo adeegyada Apple. Baro sida loo maareeyo diiwaangelintaada ama dib ugu dhig lambarkaaga sirta ah ee Apple ID, iyo waxyaabo kale.
Apple ayaa go'aansatay Daahfurka codsi si loo xoojiyo taageerada iyo adeegga farsamada looma baahna in lagu waasho websaydhkaaga. Waa Apple Support, oo ah barnaamij fudud oo isu dhigma oo dhammaystiran oo loo heli karo macruufka iyo iPadOS. Markay sannadahu dhammaadaan, barnaamijka waxaa laga helaa warar badan oo dheeri ah wuxuuna noqday meel tixraac ah oo laga codsado caawimaad xagga farsamada ah iyo xitaa codsashada ballamo si aad u aado Dukaanka Apple.
Sidan ayaad kula xiriiri kartaa taageerada Apple
Cusub cusub 4.2 version wuxuu soo bandhigayaa seddex waji oo cusub oo hagaajinaya adeegsiga isla markaana siiya adeegyo cusub adeegsadayaasha. Marka hore, Xusuusin xulasho ayaa isku dhafan boos celis ahaan wicitaan taleefan ama fariin qoraal ah. Tan waxaa lagu dhex daray dukaanka Apple Store ee ay kugula socodsiinayaan markii Genius uu xor ahaa oo aad tagi kartid dukaanka. Si kastaba ha noqotee, qaabkan cusub markii la sameynayo boos celinta waad dejin kartaa xusuusta si otomaatig ah.
Sidoo kale waa lagu daray qalab si loo hubiyo caymiska iyo xaaladda dammaanadda ee alaabtayada. Haddii ay dhacdo inaan haysanno AppleCare, waxaan arki karnaa dhinacyada kala duwan ee aan soo daboolnay iyo habka lagu helo kaalmada aan u baahan nahay. Intaas waxaa sii dheer, a Clip App si aad si fudud u hubiso damaanada soo bandhigida lambarka taxanaha ama adoo dooranaya qalabka aqoonsigeenna Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » 'Taageerada Apple' waxay sahlaysaa in la arko dammaanadda iyo caymiska alaabteenna